IArcMap: Ngenisa idatha kwiMicrostation Geographics -Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/I-ArcMap: Ngenisa idatha ukusuka kwi-Microstation Geographics
Ngexesha elithile sathetha malunga nendlela i-Geographics ingahanjiswa ngayo /ukungenisa idatha kunye ne-ESRI, ukudala iifayile ze-shp. Kodwa ukuba unayo i-ArcGIS efakwe, ukongezwa kokusebenzisana kunempawu ezintle, masiqwalasele:
1 Qalisa ukwandiswa.
Oku kwenziwa kunye izixhobo> ulwandiso kwaye apha ukongezwa kusebenza Iinkcukacha zokusebenzisana
Isixhobo singaphakathi ArcCatalog, kodwa xa kungenakusebenza kwandisa okanye ukungenayo ilayisenisi, inkqubo iya ku lumkisa (Ndikhoyo se benzisa ArcGIS 9.3)
2 Ngenisa idatha
Kanye Ukungenisa ngokukhawuleza, ipaneli iyaboniswa ecela ngokusisiseko izihloko ezibini: Siza kungenisa ntoni kwaye siza kuyigcina phi. Kule meko, ndifuna ukungenisa idatha kwi Projekthi ye Geographics, zigcinwe kwiziko lokufikelela kwi-database, kwaye iziphi iimpawu zadalwa kwifayile ye-dgn kwaye ndifuna ukuhlala ngaphakathi kwi-geodatabase.
Phatha iDataset. Ikhredithi kufuneka inikezwe ukuba ngolwandiso lwe-ArcGIS ungafunda kwaye uqhubekeke nedatha ye-CAD / GIS kwiifomathi ezingaphezu kwe-115 ezixhaswe yi-FME ye Safe Isoftware. Phakathi kwabo, AutoDesk, CityGML, GeoJSON, GeoRSS, Google Earth, IDRISI, Geomedia, LandXML, MapInfo, PostGIS, PostgreSQL, Trimble JobXML, TIGER, WFS, njl.
Kwimeko ye-Bentley, kukho ukhetho lokungenisa i-vector elula kunye nakwiprojekthi yeJografi (ayikayenzi ngedatha ye-xfm kwi-Bentley Map). Qaphela ukuba iifayile ze-dgn zingabizwa ngeendlela ezininzi, ezinje nge-.cat, .hid, .adm, .cad, njl. Ukwenza oku, kuya kufuneka wenze ukhetho kwi izixhobo> iinketho> CAD, ukuba akukwenziwanga, iya kuqonda kuphela iifayile zokongezwa kweetyala.
Umthombo. Apha umthombo weenkcukacha zendawo zichongiwe, kulo mzekelo sikhetha Bentley Microstation GeoGraphics, njengeFomathi. Emva koko ungene Dataset sikhetha ifayile equkethe unxibelelwano lwendawo, kufuneka sikhumbule ukuba ukongezwa kwefayile kufuneka kube yinto eboniswe kwiprojekthi yeGeographics, kwaye ibhaliswe njengombutho mslink isekelwe kuyo.
Kufuneka umise inkqubo yoqhagamshelwano eneemephu, kule meko, iprojekthi, i-UTM, iDatum WGS84 kunye ne-16N.
Iiparamitha zoxanduva maziqwalaselwe kwiqhosha izicwangciso. Kule meko:
Uxhumano lwentlobo ye-ODBC, kwiziko ledatha elibizwa ngokuba yiProyecto_local.mdb
Sifaka umsebenzisi kunye nephasiwedi echazwe kwiprojekthi
Emva koko sikhetha iimpawu esithemba ukuba ziya kungeniswa ngaphakathi. Ngeenjongo zomzekelo, ndinomdla kwimida yebhloko, oko kuthetha ukuba ndiza kuzisa kule mephu, izithwali ezinolu phawu zinikezelweyo.
Ukongeza, kunokwenzeka ukufumanisa ukuba sifuna iiseli (iibhloko) zigcinwe njengezinto ezidibeneyo. Kananjalo ukuba ifomathi yeyunithi iya kuba yeyokuqala okanye yesibini (inkosi okanye ngaphantsi).
Yilungiselelwe, ukuba silinde kunye Izixhobo ezinzima, ezo zinto ziqulethe iirveve, imigca yeqela kunye imilo ezininzi. Ezi zinokudityaniswa (imenyu) okanye usasaze iinqhagamshelo kunye nezikhonkco zento nganye ukuya kwintsimi enye kwitafile (eziliqela ukuya kwelinye).
Ekugqibeleni, ukuba silindele ukuba iicatshulwa ezininzi zihlukane.
Ngaphandle kokuba kukho into eyahlukileyo, i-ArcGIS idala geodatabase negama lefayile ye-dgn, apho yonke idatha iya kufakwa.
Ikhonsoli iqala inkqubo yayo kwaye ilumkise ukuba akukho nto inokufezekiswa, kwaye xa ifikelela kwiirekhodi ibonisa ukuba bangaphi abangena kwindawo yogcino lwedatha. Kwakhona kulawulo olwenziweyo ifayile iqulethe ifayile ye ungene yintoni eyenzekayo ukungenisa.
Apho banayo, imida yeapulo njengokuba isigaba kwisiseko sedatha, ngendlela efanayo ongayifaka iimpawu ezahlukileyo, ezikuthi xa kukho iithebula ezihambelanayo ngaphakathi kwi-mdb ziya kuza njengempawu zobume.
AutoDesk Bentley Systems Dgn ESRI Umhlaba ka-Google shp
Eyona nto, ndicinga ukuba kufuneka ufake ukukhutshwa kokungaxhatshazi
Inomdla kakhulu, njengesiqhelo ...
Kudala ndivavanya, kodwa ubunzima bokuqala endibufumanayo kukuba nge-arcGIS 9.3 andinayo imithombo (kuphela i-gml kunye ne-wfs) kwaye ukhetho lokwenza entsha lukhubazekile, ndinethuba lokungenisa kuphela. Khangela ulwazi kwiwebhusayithi ye-esri ukubona ukuba ezi fomati zotshintshiselwano (.fds iifayile) zinokukhutshelwa. Ngokukodwa kuba ndinomdla kwi-postgreSQL / postgis ...
Uyazi ukuba yintoni e ngahambi kakuhle?
Ukubulisa kunye nokubonga kwangaphambili!
Ndenze ukuba ndifumane olu xwebhu, ngokwenene ndifumana inkcazo epheleleyo kakhulu kwimisebenzi yokuqala (kwaye ingeyona isiseko). Epheleleyo kwaye efanelekileyo kakhulu, ngaphezu kokuchazwa kakuhle.
Ndiyabonga kakhulu ngokukwabelana ngolwazi, ingakumbi kumntu oqala kule miba.